News - Mandalay Catholic Archdiocese
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကက်သလစ် ဆရာတော်များ အဖွဲ့ချုပ်၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးနှင့် ဘဏ္ဍာထိန်း၊ ရန်ကုန် ကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ ဆရာတော်ကြီး အာ့ခ်ျဘိရှော့ ချားလ်စ်ဘို နော်ဝေးနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိခြင်း
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကက်သလစ် ဆရာတော်များ အဖွဲ့ချုပ်၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးနှင့် ဘဏ္ဍာထိန်း၊ ရန်ကုန် ကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ ဆရာတော်ကြီး အာ့ခ်ျဘိရှော့ ချားလ်စ်ဘို သည် ၀၄-၁၀-၂၀၁၂ ကြာသပတေးနေ့ တွင် နော်ဝေးနိုင်ငံ Oslo (အိုစလို) မြို့တော်သို့ နော်ဝေးစံတော်ချိန် ၁၁း၂၀ နာရီတွင် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် နော်ဝေး နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ ဆရာတော်ကြီး (His Exeellency Bishop Bernt I. Eidsvig) နှင့် သွားရောက်တွေ့ဆုံ ခဲ့ပါသည်။ ထိုတွေ့ဆုံပွဲတွင် ဆရာတော်ကြီး အာ့ခ်ျဘိရှော့ ချားလ်စ်ဘိုနှင့် အတူ နော်ဝေး မြန်မာကက်သလစ် အလုပ်အမှု့ဆောင်အဖွဲ့၊ ဥရောပရောက် မြန်မာကက်သလစ်အဖွဲ့ ဥက္ကဌနှင့် အကြံပေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တို့ လိုက်ပါသွားကြပါသည်။ နော်ဝေးတွင် နေထိုင်ကြသော မြန်မာကက်သလစ် မိသားစုများနှင့် ၀၆-၁၀-၂၀၁၂ စနေနေ့တွင် အတူတကွ မစ္ဆားတရားတော်မြတ်နာယူခြင်း၊ ဆရာတော်ကြီး မှ နော်ဝေးရောက် မြန်မာ ကက်သလစ်ဘာသာတူများအား လက်ထပ်ထိမ်းမြှားခြင်း စက္ကရမင်တူးနှင့် ခရစ္စမားအားပေးခြင်း စက္ကရမင်တူး များ ပေးအပ်ခြင်းနှင့် အတူ ဘာသာတူများနှင့် ဘာသာရေးအကြောင်းများ ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ထို့နောက် နော်ဝေး ဘာသာတူများမှ ဆရာတော်ကြီးအား နော်ဝေးနိုင်ငံရှိ ဘာသာတူများအတွက် ဘုန်းတော်ကြီး တပါးနှင့် ကလေးငယ်များ အတွက် မြန်မာစာပေနှင့် ဘုရားစကား သင်ကြားနိုင်ရန်အတွက် စစ္စတာရ်များ ထားရှိပေးရန် တို့ကို ဆွေးနွေးကြ ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲအပြီးတွင် ဆရာတော်ကြီးမှ ဘာသာတူများအား လက်ဆောင်များပေးခြင်း ဘာသာတူများမှ ဆရာတော်ကြီးအား လက်ဆောင်များပေးအပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ကာ ဆရာတော်ကြီးမှ ဆားနှင့် တူသော ခရစ်ယာန် များ ဖြစ်ကြဖို့နှင့် ရှေ့ဆက်ပြီး ဘာသာတရား ပိုမို ကိုင်းရှိုင်းပြီး နေထိုင်သွားကြရန် လမ်းညွှန်သြ၀ါဒစကား မိန့်ကြားကာ အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။ ဆရာတော်ကြီးသည် ၁၇-၁၀-၂၀၁၂ ရက် နော်ဝေးစံတော်ချိန် မွန်းလွဲ ၂း၂၀ နာရီတွင် နော်ဝေးနိုင်ငံ မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပါသည်။
မေတ္တာအားမာန်သောတရှင်အသင်း ၄၊၂၀၁၂ အစည်းအဝေး(မန္တလေး) မေတ္တာအားမာန်သောတရှင်အသင်း ၄၊၂၀၁၂ အစည်းအဝေးကို မန္တလေးမြို့ရှိR.V.A ဗဟိုရ်အကျိုးတော်ဆောင်ရုံးတွင် (၂၀၁၂)ခု သြဂုတ်လ(၂၃)ရက် နံနက်(၁၀း၃၀)နာရီတွင် ကျင်းပရာ အသင်းသား(၂၅)ဦးတက်ရောက်သည်။ အစည်းအဝေးကို မိမိ တို့ ယုံကြည်သက်ဝင်သော ဘာသာတရားအတိုင်း ဆိပ်ငြိမ်စွာဆုတောင်းခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့ပြီးR.V.Aရုံး တာဝန်ခံ စ္စတာ စီစီလျားစန်း ယုမော်မှ တက်ရောက်လာသူများအား ကျေးဇူးတင်ကြောင်း၊R.V.A (၂၀၁၃)ခုနှစ် တွေ့ဆုံပွဲအတွက် ပြင်ဆင်စရာများ၊ ရန်ကုန် သောတရှင်အသင်း၏ လှုပ်ရှားမှုအားရှင်းလင်းဖော်ပြပြီး အသင်း၏ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ၌ ပိုမို၍လက်တွဲလုပ် ဆောင်ကြ ပါရန် တိုက်တွန်းပြောကြား သွားပါသည်။ ယခင်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို အတွင်းရေးမှူးကိုယ်စား ကိုဇော်နိုင်ဦးက ဖတ်ကြားပြီး ဥက္ကဌမှအတည်ပြု လက်မှတ်ရေး ထိုးသည်။ ထို့နောက်ျွ.ဠ.ဗ စမသာသအငသညအတွက် လက်ကမ်းကြော်ငြာများဖြန့်ဝေရန်နှင့်RVA ထာဝရငွေပဒေသာပင် အ တွက် ငွေများတိုးပွားအောင် ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြရန် သဘောတူကြသည်။ ဥက္ကဌ ကိုဝဏ္ဏဘုန်းမှ စုံစုံညီညီတက်ရောက်ကြသည့်အတွက် အားရကျေနပ်ကြောင်းဆက်လက်၍ အတူတကွ ကြိုးစားသွား ကြရန် အားပေးပါကြောင်းပြောကြားသည်။ ဒုဥက္ကဌဦးမောင်မောင်ဦးမှလည်း မိမိဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လူမှုရေး ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို တင်ပြခဲ့သည်။ အသင်းကဆုံးဖြတ်ထားသည့်အတိုင်း မကျန်းမာသူတစ်ဦးနှင့် နာရေးတစ်ဦး အား ငွေကျပ်(၁၀၀၀၀)စီထောက့်ပံ့ခဲ့ သည်။ လျှို့ဝှက်အလှူငွေကောက်ခံရာ(၁၀၁၀၀)ကျပ်ရရှိ၍ တာဝန်ခံစ္စတာ စီစီလျား စန်းယုမော်အား အပ်သည်။ နောက်တစ်ကြိမ်အ စည်းအဝေးကို စက်တင်ဘာလ(၂၂)ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်ရန် အားလုံး သဘောတူကြပြီး အစည်းအဝေးကို (၁၁း၄၅)နာရီတွင် ရုပ်သိမ်း သည်။။။ \_
မေတ္တာအားမာန်သောတရှင်အသင်း ၄၊၂၀၁၂ အစည်းအဝေး(မန္တလေး)
မေတ္တာအားမာန်သောတရှင်အသင်း ၄၊၂၀၁၂ အစည်းအဝေးကို မန္တလေးမြို့ရှိR.V.A ဗဟိုရ်အကျိုးတော်ဆောင်ရုံးတွင် (၂၀၁၂)ခု သြဂုတ်လ(၂၃)ရက် နံနက်(၁၀း၃၀)နာရီတွင် ကျင်းပရာ အသင်းသား(၂၅)ဦးတက်ရောက်သည်။ အစည်းအဝေးကို မိမိ တို့ ယုံကြည်သက်ဝင်သော ဘာသာတရားအတိုင်း ဆိပ်ငြိမ်စွာဆုတောင်းခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့ပြီးR.V.Aရုံး တာဝန်ခံ စ္စတာ စီစီလျားစန်း ယုမော်မှ တက်ရောက်လာသူများအား ကျေးဇူးတင်ကြောင်း၊R.V.A (၂၀၁၃)ခုနှစ် တွေ့ဆုံပွဲအတွက် ပြင်ဆင်စရာများ၊ ရန်ကုန် သောတရှင်အသင်း၏ လှုပ်ရှားမှုအားရှင်းလင်းဖော်ပြပြီး အသင်း၏ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ၌ ပိုမို၍လက်တွဲလုပ် ဆောင်ကြ ပါရန် တိုက်တွန်းပြောကြား သွားပါသည်။
ယခင်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို အတွင်းရေးမှူးကိုယ်စား ကိုဇော်နိုင်ဦးက ဖတ်ကြားပြီး ဥက္ကဌမှအတည်ပြု လက်မှတ်ရေး ထိုးသည်။ ထို့နောက်ျွ.ဠ.ဗ စမသာသအငသညအတွက် လက်ကမ်းကြော်ငြာများဖြန့်ဝေရန်နှင့်RVA ထာဝရငွေပဒေသာပင် အ တွက် ငွေများတိုးပွားအောင် ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြရန် သဘောတူကြသည်။
ဥက္ကဌ ကိုဝဏ္ဏဘုန်းမှ စုံစုံညီညီတက်ရောက်ကြသည့်အတွက် အားရကျေနပ်ကြောင်းဆက်လက်၍ အတူတကွ ကြိုးစားသွား ကြရန် အားပေးပါကြောင်းပြောကြားသည်။ ဒုဥက္ကဌဦးမောင်မောင်ဦးမှလည်း မိမိဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လူမှုရေး ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို တင်ပြခဲ့သည်။ အသင်းကဆုံးဖြတ်ထားသည့်အတိုင်း မကျန်းမာသူတစ်ဦးနှင့် နာရေးတစ်ဦး အား ငွေကျပ်(၁၀၀၀၀)စီထောက့်ပံ့ခဲ့ သည်။ လျှို့ဝှက်အလှူငွေကောက်ခံရာ(၁၀၁၀၀)ကျပ်ရရှိ၍ တာဝန်ခံစ္စတာ စီစီလျား စန်းယုမော်အား အပ်သည်။ နောက်တစ်ကြိမ်အ စည်းအဝေးကို စက်တင်ဘာလ(၂၂)ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်ရန် အားလုံး သဘောတူကြပြီး အစည်းအဝေးကို (၁၁း၄၅)နာရီတွင် ရုပ်သိမ်း သည်။။။
R.V.Aသောတရှင်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း ခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်း(မန္တလေး) (Audience Research Pilot Workshop)
ရေဒီယိုဗဲရီးတာ့စ် အသံလွှင့်ခြင်း၏ သောတရှင်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းသင်တန်းကို မန္တလေးကက်သလစ် ဆရာတော်ကြီး ကျောင်းတိုက် အစည်းအဝေး ခန်းမဆောင်တွင် (၂၀၁၂)ခု၊ ဇူလိုင်လ(၁၇)ရက်မှ (၂၈)ရက်နေ့ အထိ င်္Fr.Gabriel U Htun Myint ဦးဆောင်ကာ ကျင်းပပြုလုပ်သည်။ ဤသင်တန်းတွင် Austraila နိုင်ငံမှ Mr.John Goslino မှ သောတရှင် စစ်တမ်းကောက်ယူ ခြင်းကို အသေးစိတ် စနစ်တကျကောက်ယူပုံ၊ ကောက်ယူနည်းကို ပို့ချသည်။ွGermany နိုင်ငံ Cameeo မှ Miss Daniela Frank က အကြံပြုလမ်းညွှန်ပေးသည်။
ဤသင်တန်းသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ အသံလွှင့် အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သည့် ကရင်အစီအစဉ်၊ ကချင်အစီအစဉ်၊ ချင်း အစီအစဉ်နှင့် မြန်မာဘာသာ အစီအစဉ်တို့မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်(၁၃)ဦးနှင့် လေ့လာသူ(၆)ဦး၊ ဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော်ပေါလ် ဇိန်တုန်း ဂရောင်တို့ တက် ရောက်ကြသည်။ သင်တန်း တက်ရောက်သူ(၂)ဦးစီတို့သည် မန္တလေးသာသနာအတွင်းရှိ စိန်ဇေးဗီးယားအုပ်စု၊ စိန်မိုင်ကယ်(သံဝင်း) သာသနာအုပ်စု၊ စိန်ဂျိုးဇက်(လဖုန်း) သာသနာအုပ်စုနှင့် စိန်ဂျွန်း သာသနာအုပ်စု အသီးသီးသို့ ကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်း၍ စစ်တမ်း ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ဇူလိုင်လ(၂၅)ရက် ည(၈)နာရီတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ် အသီးသီးမှ တာဝန်ခံများအစည်းအဝေးပြုလုပ် ပြီျး R.V.A (Myanmar Services) Audience Research committee, Myanmar ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၎င်းင်းကော်မတီတွင် နာယကအဖြစ် မန္တလေး ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ပေါလ် ဇိန်တုန်းဂရောင်၊ ဥက္ကဌအဖြစ် ဘုန်းတော်ကြီး ဂျွန်ဦးစိုးတင့်၊ အတွင်းရေးမှူး (၁) အဖြစ် ဘုန်းတော်ကြီး ဂျွန်ပေါလ် မန်းစိမ်ရော်၊ အတွင်းရေးမှူး(၂)အဖြစ် ဘုန်းတော်ကြီးလေအို (လူထုဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးရုံး)၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူးအဖြစ် စ္စတာစီစီလျားစန်းယုမော်၊ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်(၁) Fr.Henary Eiklein (၂)Fr.Michal Thang Law Ha (၃) Fr. John Muler (၄) Fr.Peter Hka Aung Tu (၅) Fr.Paschael Tu Ja (၆) Fr. Philip Za Hei Lian (၇) Fr.David Mg Mg Htun တို့ဖြစ် သည်။
ဇူလိုင်လ(၂၈)ရက်နေ့ ညနေ(၅း၃၀)နာရီတွင် သင်တန်းအပိတ် မစ္ဆားကို ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ဦးဆောင်၍ ရဟန်းတော် များ နှင့် အတူ ပူဇော်ပြီး ညနေ(၆)နာရီတွင် သင်တန်းသား၊သူများအား သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ချီးမြှင့်ခြင်း၊ ပို့ချသူများအား ဂုဏ်ပြုလက် ဆောင်များပေးခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပြီးအခမ်းအနားရုပ်သိမ်းပါသည်။။
R.V.A မေတ္တာအားမာန်သောတရှင်အသင်း ၃၊၂၀၁၂ အစည်းအဝေး(ချမ်းသာကုန်း)
R.V.A မေတ္တာအားမာန်သောတရှင်အသင်း ၃၊၂၀၁၂ အစည်းဝေးကို ချမ်းသာကုန်းရွာ စိပ်ပုတီးမယ်တော်သခင်မခန်းမ၌ (၂၀၁၂) ဇွန်လ(၂၃)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀း၃၀)နာရီတွင် စတင်ကျင်းပရာအသင်းဝင်(၃၃)ဦး တက်ရောက်သည်။ R.V.A မေတ္တာ အားမာန်သောတရှင် အသင်း (၂)ကို တက်ရောက်လာကြသော အသင်းဝင်များ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အောက်ပါအ တိုင်း ဖွဲ့စည်း လိုက်ကြသည်။
(၁) ဥက္ကဌ လောရင့်ဦးငွေကြီး (ချမ်းသာကုန်း)
(၂) ဒုဥက္ကဌ လောရင့်ဦးထွန်းကြိုင် (ချမ်းသာကုန်း)
(၃) အတွင်းရေးမှူး ဖရန်စစ်ဦးဝင်းအောင် (ချမ်းသာကုန်း)
(၄) ဘဏ္ဍာရေးမှူး သောမတ်စ်ဦးထွန်းမင်းလတ် (ချမ်းသာကုန်း)
(၅) အဖွဲ့ဝင် သြဂုတ်စတင်းဦးစိုးမြင့် (ချမ်းသာကုန်း)
(၆) အဖွဲ့ဝင် ဦးချစ်ထွန်း (ချမ်းသာကုန်း)
(၇) အဖွဲ့ဝင် ဦးလှဝင်း (မြစ်ငယ်)
(၈) အဖွဲ့ဝင် ရဲလင်းထွန်း (မြစ်ငယ်)
(၉) အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်သန်း (မြစ်ငယ်)
(၁၀) အဖွဲ့ဝင် ဦးလှကျော် (မြစ်ငယ်)
(၁၁) အဖွဲ့ဝင် မစန်းစန်းဝင်း (မြောက်ကိုင်း)
(၁၂) အဖွဲ့ဝင် မဖြူဖြူနွယ် (မြောက်ကိုင်း)
(၁၃) အဖွဲ့ဝင် ဦးကျော်ဆွေ (မြောက်ကိုင်း)
ရွေးချယ်ခံရသော ဥက္ကဌ ဦးငွေကြီးမှ မိမိဥက္ကဌ အဖြစ်တာဝန်ပေးခြင်းခံရသဖြင့် ၀မ်းသာဂုဏ်ယူပါကြောင်ျးR.V.Aအတွက် မိမိတတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားထမ်းဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ချမ်းသာကုန်းသာသနာ အုပ်စုကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီး ဖာသာရ်ဒေးဗစ်ကျော်စွာ လက်ထက်က ဖိလစ်ပိုင်မှာ ပညာသင်ကြားစဉ် R.V.Aသို့ သွားရောက်ကာ ဖာသာရ်ဂျိုတုအား ကူညီခဲ့ပါ ကြောင်း၊ ယခင်ျ R.V.Aသောတရှင် တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ချမ်းသာကုန်းမှာ လာရောက်ပြီျး R.V.A မေတ္တာအားမာန်သောတရှင်အသင်း(၂)ကို ဖွဲ့စည်းတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း၊ ဇော်ဂျီ၊ ဆင်ဖြူကျေးရွာ အုပ်စုများကို ပါ စည်းရုံး လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ပြောကြားသွား သည်။
မေတ္တာအားမန် ဒုဥက္ကဌဖြစ်သည့် ဦးမောင်မောင်ဦးကလည်း မိမိသည် ဒုက္ခိတတစ်ဦးဖြစ်ပြီျးR.V.Aကြောင့် မိမိဘ၀ကို ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ျR.V.A ကို ဆက်လက်နားဆင်ခြင်းဖြင့် ခွန်အားများရယူကြပါရန် တိုက်တွန်းပြောကြား သွားသည်။
ထို့နောက် လျှို့ဝှက်အလှူငွေကောက်ခံရာ (၁၁၆၅၀) ကျပ်ရရှိသည်။ နန်းရှေ့မသိင်္ဂီလှူငွေ (၅၀၀၀)ကျပ်နှင့်၊ မြစ်ငယ်မှ ဦးလှ ၀င်း-ဒေါ်မာရီယား လှူငွေ(၃၀၀၀)ကျပ်တို့ ပါပေါင်းလိုက်ရာ စုစုပေါင်း(၁၉၆၅၀)ကျပ် ရရှိသည်။ ဤငွေများကို အသင်းရံပုံငွေအဖြစ် ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဦးသောမတ်စ်အားပေးအပ် ခဲ့သည်။ နောက်တစ်ကြိမ် အစည်းအဝေးကို မေတ္တာအားမန် အသင်း(၂)စုပေါင်း၍ျွR.V.A ကျိုဆောင်ဗဟိုရ်ရုံးတွင် (၂၈-၇-၂၀၁၂)နေ့၌ ကျင်းပရန်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ အစည်းအဝေးကို (၂း၃၀)နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းသည်။
မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းသာယာရေးနှင့် ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ခရစ်ယန်အသင်းတော်များ စုပေါင်း ၀တ်ပြုဆုတောင်းခြင်း၊
၂၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊-(မန္တလေးမြို့ )
အမိမြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းသာယာရေးနှင့် ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် ခရစ်ယန်အသင်းတော်များ စုပေါင်း ၀တ်ပြု ဆုတောင်းခြင်း အစီအစဉ်များးကို ယခုလ စက်တင်ဘာလ ၂၅-၂၆-၂၇ ရက်နေ့များတွင် မန္တလေးမြို့ ရွှေနှလုံးတော် ကာ သီဒြယ် ကက်သလစ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင် ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ယင်းစုပေါင်းဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်ကို ခရစ်ယန်အသင်းတော်အသီးသီးမှ ယုံကြည်သူ ၂၀၀ ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ ကြပါသည်။ မြစ်ကြီးနား ၊ ရန်ကုန် ၊ကလေး ၊လွယ်ကော် ၊ အစရှိသည့် ရပ်ဝေးမှ အသင်းတော်များလည်း ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။
ယခုအစီအစဉ်သည် ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရပါသည်။ ပထမအကြိမ်ကို ယမန်နှစ်(၂၀၁၁)က ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။
ယခုအစီင်္အစဉ်၏အဓိက ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ယခုလတ်တလောဖြစ်ပျက်နေသော ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ကချင်ပြည်နယ် များတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အမှုအခင်းများ အတွက် စုပေါင်း ဆုတောင်းရန် အတွက်ဖြစ်ပါသည်။
အကြောင်းမူကား လူနှစ်ဦး-သို့မဟုတ် သုံးဦးတို့သည် ငါ၏နာမ၌ စုဝေးကြလျှင် ထိုအရပ်၌ သူတို့အလယ်တွင် ငါရှိ သည် (မာတေဦး ၁၈း၂၀ )ဟုဆိုထားသောကြောင့် အောက်ပါ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် စုဝေး ဆုတောင်းကြကြောင်း သိရပါ သည်။
(၁)စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းသာယာရေးအတွက် ဆုတောင်းခြင်း၊
(၃)ဥဿုံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆုတောင်းခြင်းနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်ခြင်း၊
စုပေါင်း ဆုတောင်းခြင်း အစီအစဉ်၏ နောက်ဆုံးနေ့တွင် ပါဝင်သူ ယုံကြည်သူ အယောက်တိုင်းသည် နေ့လယ်စာ မသုံး ဆောင်ပဲ အစာရှောင် ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြကြောင်း သိရပါသည်။
အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး ငြိမ်းချမ်းသာယာခြင်း ၊စည်းလုံးညီညွှတ်ခြင်းနှင့် ဘက်စွုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါစေကြောင်း ဆုမွန် ကောင်းတောင်းလိုက်ပါသည်။။
မန္တလေးကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ ၊ချမ်းသာကုန်းကျေးရွာရှိ နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သော စိပ်ပုတီးမယ်တော်ပွဲကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၉ ၊ ၃၀ ရက်နေ့များတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ယခုနှစ်တွင် စိပ်ပုတီးမယ်တော်ပွဲကို ထူးခြားစွာ ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ကြားသိရပါသည်။ အမိကက်သလစ် သာသနာတော်ကြီးက ၂၀၁၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအထိကို နည်းသစ်စနစ်သစ်ဖြင့် သာသ နာပြုခြင်းနှစ်(Year Of New Evengalization)ဟုသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ထို့အတူ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့အထိကို ယုံကြည်ခြင်းနှစ် (Year Of Faith)အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။
ထို့ကြောင် ယခုနှစ်ချမ်းသာကုန်း စိပ်ပုတီးမယ်တော်ပွဲကိုအောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပ မည်ဖြစ်ကြောင်းကြားသိ ရပါသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်(တနင်္လာနေ့)
ညနေ(၅း၀၀)နာရီ = - နည်းသစ်စနစ်သစ်ဖြင့်သာသနာပြုခြင်းနှစ် (Year Of New Evengalization)ပိတ်ပွဲအခမ်းအနား။
-ပွဲတော်အ၀င် မစ္စားတရားကြီး ၊
-ကျေးရွာအတွင်း စီတန်းလှည့်လည်ခြင်း ၊
- မယ်တော့်ဂူလှိုင်တော်တွင် စုပေါင်း စိပ်ပုတီးစိတ်ခြင်း၊
- ည(၉း၀၀) နာရီ မှ နံနက် (၅း၀၀)နာရီ အထိ = တစ်နာရီခြားမစ္စားတရားပူဇော်ခြင်းများ၊
၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက် (အင်္ဂါနေ့)
နံနက် (၈း၀၀)နာရီ ။ - ယုံကြည်ခြင်းနှစ်( Year Of Faith ) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ၊
ချမ်းသာကုန်းမယ်တော်သည် ကိုးရမယ်တော် အမည်ဖြင့် ပိုမိုလူသိများကြောင်းလည်း သိရပါသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး မတိုင်မီက တည်းက လူတိုင်းကြည်ညိုလေးစားခြင်းခံရသည့် လူတိုင်းအားကိုးကြသည့်ဆုတောင်း ပြည့် မယ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သိရပါ သည်။ အထူးသဖြင့် သားသမီး ရရန်ခက်ခဲသူများ အားကိုးရ သည့်မယ်တော်ဖြစ်ပါ သည်။
ထို့ကြောင့်မယ်တော့်အားချမ်းသာကုန်းစိပ်ပုတီးမယ်တော်ကိုကြည်ညိုသူအပေါင်းမိမိရောက်သည့်နေရာမှ မယ်တော့် ပွဲ တော်နေ့တွင် အာရုံပြုဆုတောင်း နိုင်ရန် သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါသည်။
မိဘမေတ္တာ အလှကမ္ဘာ (မြင်းခြံ)
မန္တလေး ကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ မြင်းခြံမြို့ မိဘများပွဲနေ့ အခမ်းအနားကို ၂၈.၇.၂၀၁၂ နေ့ ညနေ ၅း၀၀ နာရီတွင် မစ္ဆားတရားဖြင့် စတင်ရာ ဘုရားကျောင်းဆင်းတါင် လက္ဘက်ရည်၊ မုန့်ကျွတ်ဖြင့် ကျွေးမွေးကာ ည၇း၀၀နာရီ၌ ဂုဏ်ပြုပွဲ ဆင်နွဲရာ ကျောင်းထိုင်ဖာသာရ် ပြုံးချို၊ စစ္စတာရ်များကို ခန်းမဆောင်အတွင်း ပင့်ဆောင်ခြင်း၊ အသက်(၆၅)နှစ်အထက် ကန်တော့ခံ မိဘများ နေရာယူကြ၏။ စစ္စတာရ် Darvi မှ အဖွင့်မေတ္တာသီဆိုခြင်း၊
လူငယ်များမှ အဖွင့်သီချင်းဆိုခြင်း၊ သက်ထွေးလူငယ်များမှ မိဘ ဂုဏ်ပြုတေးသီဆိုခြင်း၊ လူငယ်အတွင်းရေးမှူး မမီမီဇော်မှ ဂုဏ်ပြုသြဘာစာ ဖတ်ကြားခြင်း၊ ဦးမင်းနိုင်မှ ဆု့ါ်မစကား ပြောကြားခြင်း၊ သာသနာအကျိုးဆောင်များ၊ လူငယ်များမှ မိဘများအား လက်ဆောင်ပစ္စည်း ပေးအပ်ခြင်း၊ လူငယ်ဥက္ကဌ ကိုရေမွန်မှ အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မိဘများအာ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မနောကံ၊ ကံသုံးပါးဖြင့် ပြစ်မှားမိသော အပြစ်များအတွက် လက်အုပ်ချီ ကန်တော့ခြင်း၊ လူငယ်များ၊ သက်ထွေးလူငယ်များမှ အပိတ်သီချင်း သီဆိုခြင်း၊ ဖာသာရ်၏ ဆုတောင်းနှင့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ပေးခဲ့၏။ ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်များဖြင့် တင်ဆက်ရာ တစ်ဦးချင်း သီဆိုမှုများ၊ တေးသရုပ်ဖော်အကများ၊ စုံတွဲအဆိုများ၊ သာသနာ အကျိုးဆောင် ဥက္ကဌ၏ သီဆိုမှုများ၊ ရင်သွေးငယ်များ၏ အကများဖြင့် မိဘမေတ္တာ အလှကမ္ဘာကို ဝေဆာခဲ့၏။
သံယောဟန် ဗတ္တိဇံ ဘုရားကျောင်းပွဲ (နဘက်)
မန္တလေး ကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ မြောင်မြို့နယ် နဘက်ရွာ သံယောဟန် ဗတ္တိဇံ ဘုရားကျောင်းပွဲတော် ကျင်းပရာ ၂၆.၆.၂၀၁၂ ညနေ ၄း၃၀နာရီ ဘုရားကျောင်းတော်၌ စိတ်ပုတီး (၂၀) စိပ်ခြင်း ယေဇူးရွှေနှလုံးတော်၊ အမိမယ်တော်၊ သံယောဟန်ဗတ္တိဇံ ဆင်းတုတော်များနဲ့ စီတန်းလှည့်လှည်ရာ ရပ်ကွက်ထဲရှိ ဘုရားစင် (၃)ခု၌ စိတ်ပုတီး (၁၀) စီစိပ်ခြင်း၊ ဘုရားကျောင်းထဲ၌ ကိုယ်တော်မြတ်ကောင်းကြီးဖြင့် အဆုံးသတ်ခဲ့၏။
ည ၈း၀၀ နာရီတွင် ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်ကျင်းပရာ မိုးမင်း၏ Organ တီးခတ်ခြင်း၊ တကိုယ်တော် ဖျော်ဖြေသီဆိုခြင်းများ၊ ဆီမီးခုံရွာမှ ကျောက်ဆည်ဆင်အကဖြင့် တင်ဆက်ခဲ့၏။ ၂၇.၆.၂၀၁၂ နံနက် ၇း၀၀နာရီတွင် သံယောဟန် ဗတ္တိဇံ ဘုရားကျောင်းပွဲတော် မ စ္ဆားကို ပွဲနေ့ရှင် ဖာသာရ် ဂျွန်ဦးအေးကျော်မှ ဦးဆောင်ခြင်းနှင့် သြ၀ါဒပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့၏။
မစ္ဆားအပြီးတွင် နှုတ်ဆက်ပွဲ ကျင်းပရာ လူငယ်များမှ နှုတ်ဆက်သီချင်း သီဆိုခြင်း၊ ဦးခင်မောင်တင့်မှ သြဘာစာ ဖတ်ကြားခြင်း။ ပဲဆီတပုံးစီ ​ဖာသာဂျွန်အေးကျော်၊ ဖာသာဂျွန် မောင်ဆန်းတို့အား ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း၊ ဦးခင်မောင်ဇင်+ဒေါ်လဲ့လဲ့မော်(လားရှိုး)မှ ဖာသာရ်များ၊ စစ္စတာရ်များအား အလှူငွေများ ဆက်ကပ်ခြင်း၊ ဆွမ်းဒကာဦးသန်းဝင်း၊ ထမင်းအလှူရှင် ဦးမောင်မောင်+ဒေါ်ဝင်းညို(မန္တလေး) ဦးမောင်မောင်+ဒေါ်ခင်ညို(မုံရွာ) သား အောင်ဇော်ဦး+မရှီလာဝင်းတို့အား ကျောင်းထိုင်ဖာသာရ် အောင်မျိုးဝင်းမှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောခြင်းနှင့် ဖာသာရ်များ၏ ကောင်းကြီးဖြင့် အဆုံးသတ်ခဲ့၏။ ကျောင်းပွဲတော်သို့ ဖာသာရ် အပါး(၂၀)၊ စစ္စတာ၁၂ပါး၊ မန္တလေး၊ မုံရွာ၊ ချောင်းဦး၊ မြင်းခြံ၊ မေဂွန်တို့မှ ဘာသာတူ ၁၀၀၀ခန့် တက်ရောက်ကြ၏။
မန္တလေး ကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာမှ ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး ပေါလ် ဇိန်ထုန်းဂရောင်၏ ပွဲ ကျင်းပပြီးစီးခြင်း
မန္တလေး ကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာမှ ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး ပေါလ် ဇိန်ထုန်းဂရောင်၏ ပွဲနေ့ကို မန္တလေးမြို့ ရွှေနှလုံးတော် ကာသီဒြယ် ဘုရားကျောင်းတော်တွင် ၂၉. ၆.၂၀၁၂၊ နံနက် ၆း၀၀ နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ရဟန်းတော် ၁၇ပါး နှင့် ဂိုဏ်းအသီးသီးမှ သီလှရှင်များ၊ မြို့ပေါ်ရှိဘာသာတူများ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။ မစ္ဆားတရားတော်မြတ်ကို ပွဲနေ့ရှင် မန္တလေး ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး ပေါလ်ဇိန်ထုန်းဂရောင်မှ ဦးဆောင် ပူဇော်ခဲ့ပြီး တရားရေအေး တိုက်ကျွေးခဲ့ပါသည်။ မစ္ဆားတရားတော်မြတ်အပြီးတွင် ပွဲနေ့ရှင် ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီးအား နှုတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနားဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ စိန်သောမတ် ရဟန်းဖြစ်ကျောင်းသားများမှ သီချင်းနှစ်ပုဒ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ စိန်ဂျိုးဇက် သီလှရှင်ကျောင်းမှ သီလှရှင်များနှင့် ကျောင်းသူများမှ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ အဆင့်မြင့် ပညာရေး(HEC) မှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများမှ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ သီဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။ ထို့နောက် လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကို ပွဲနေ့ရှင်အား ဆက်ကပ်ခဲ့ကြပြီး ရဟန်းတော်များ၊ သီလှရှင်များနှင့် ကိုရင်များကို နံနက်စာဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဘာသာတူများအား ပေါင်မုန့်နှင့် အချိုရည်နှင့်လည်းကောင်း ဧည့်ခံခဲ့ပါသည်။
အဖေများနေ့ (Fathers' Day) ကျင်းပပြီးစီးခြင်း
အဖေများနေ့ (Fathers's Day) ကို ၉.၆.၂၀၁၂နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ ကြာနီကန် သုသာန်၌ မစ္ဆားတရားတော်မြတ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။ နံနက် ၉ နာရီအချိန်တွင် မစ္ဆားတရားတော်မြတ်မစမှီတွင် စိန်လာဇရူး ဂူဗိမာန် (၅ထပ်) ကို ဖာသာရ်ဂျွန်ဦးအေးကျော်မှ ကောင်းကြီးပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် မစ္ဆားတရားတော်မြတ်ကို ပူဇော်ကြရာ ဖာသာရ်ဂျွန်ဦးစိုးတင့်မှ ဦးဆောင်ဟောကြားပြီး ဖာသာရ်ဂျွန် ဦးအေးကျော်မှ တရားရေအေး တိုက်ကျွေးခဲ့ပါသည်။ အဖေများနေ့ပွဲကို ရဟန်းတော် ၉ပါး ပါဝင်တက်ရောက်ကြပြီး ဂိုဏ်းအသီးသီးမှ သီလှရှင်များ၊ သာသနာအုပ်စုအသီးသီးမှ ဘာသာဝင်များ ပါဝင်ခဲ့ကြပြီး နံနက်၁၁း၃၀အချိန်တွင် အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။
ဦးပဉ္ဇင်းကြီး Augustine ဇော်ထွန်း ၏ ရဟန်းသိက္ခာတင်ပွဲ ကျင်းပပြီးစီးခြင်း
ဦးပဉ္ဇင်းကြီး Augustine ဇော်ထွန်း သည် ရဟန်းသိက္ခာတင်ပွဲတော်ကို ၂၇. ၃. ၂၀၁၂ တွင် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်၊ သဲဖြူကျေးရွာတွင် မန္တလေး ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် ပေါလ် ဇိန်ထုန်းဂရောင်၏ လက်တော်မှ ချမ်းသာကုန်း (ပုလိပ်) စိပ်ပုတီး၏ မယ်တော်သခင်မ ပွဲတော်မြတ်နှင့် ပူးတွဲ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဦးပဉ္ဇင်းကြီးသိက္ခာတော်မြတ်ကို မန္တလေး ဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော်ကြီး ပေါလ်ဇိန်ထုန်းဂရောင်မှ တင်မြှောက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ရဟန်းတော် ၃၈ပါး၊ သီလရှင် ၂၆ပါး၊ ပြင်ဦးလွင် အခြေခံ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းနှင့် စိန်သောမတ်စ် အကြိုရဟန်းဖြစ် တက္ကသိုလ်တို့မှ ကျောင်းသားများ၊ အနီးစခန်းမှ စလေးရှင်း သီလရှင်ကျောင်းသူများ အပါအ၀င်၊ ရပ်နီးရပ်ဝေးမှ ဘာသာတူဦးရေ ၃၀၀၀ ကျော် ပါဝင်တက်ရောက် ခဲ့ကြပါ သည်။ မစ္ဆားတရားတော်မြတ်ကို ဆရာတော်ဘုရားကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီး Fr. Bernard Mya Thein မှ သြ၀ါဒ မိန့်ကြားခဲ့ ပါသည်။ မစ္ဆားတရားတော်မြတ်ပြီးနောက် စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းကိုလည်း တခမ်းတနား ကျင်းပခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်တော်မြတ် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတော်အခမ်းအနားဖြင့် စိပ်ပုတီး၏ မယ်တော်သခင်မ ပွဲတော်နှင့် ဦးပဉ္ဇင်းကြီး သိက္ခာတင် ပွဲတော်ကို အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။
စိန်ဗင်းဆင်းဒီပေါလ်အသင်း မန္တလေးသာသနာသို့ ရောက်ရှိခြင်း နှစ်(၁၀၀) ပြည့် ဂျူဗလီပွဲတော် ကျင်းပပြီးစီးခြင်း
စိန်ဗင်းဆင်း ဒီပေါလ်အသင်း မန္တလေးသာသနာသို့ ရောက်ရှိခြင်း နှစ်(၁၀၀)ပြည့် ဂျူဗလီပွဲတော်ကို မတ်လ၂၅ရက်နေ့ နံနက် ၈ နာရီတွင် မန္တလေး ကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် ပေါလ်ဇိန်ထုန်းဂရောင်မှ ဦးဆောင်ကာ ရဟန်းတော်များ၊ သီလှရှင်များ နှင့် ဘာသာတူများ သာသနာအသီးသီးမှ ဧည်သည်တော်များ ပါဝင်ကာ မန္တလေး ကာသီဒြယ် ခန်းမ၌ မစ္ဆားတရာတော်မြတ်ကို ပူဇော်ခဲ့ကြပါသည်။ မစ္ဆားတရားတော်မြတ်အပြီးတွင် ရဟန်းတော်များ၊ သီလှရှင်များကို နေ့လယ်ဆွမ်း ကပ်လှူခဲ့ပါသည်။ စိန်ဗင်းဆင်အသင်းဝင်များမှ အစည်းအဝေးများ ဆက်လက် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
မန္တလေး ကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ၏ စုပေါင်းလှူဒါန်းပွဲ ပြီးစီးခြင်း
မန္တလေး ကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ၏ စုပေါင်းလှူဒါန်းပွဲကို မတ်လ ၂၄ ရက် နံနက် ၈ နာရီတွင် မန္တလေး ကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး ပေါလ် ဇိန်ထုန်းဂရောင်မှ ဦးဆောင်ကာ ရဟန်းတော်များ ဂိုဏ်းအသီးသီးမှ သီလရှင်များ နှင့် ဘာသာတူများ ပါဝင်ကာ မန္တလေး ကာသီဒြယ်ခန်းမ၌ မစ္ဆားတရားတော်မြတ်ကို အလှူရှင်များအတွက် ပူဇော်ပေးခဲ့ကြပါသည်။ မစ္ဆားတရားတော်မြတ်အပြီးတွင် စာရေးတံမဲချခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီး ရဟန်းတော်များ၊ ကိုရင်ကြီးများ၊ သီလှရှင်များတို့ကို ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပြီး နေ့လယ်ဆွမ်းပါ ကပ်လှူခဲ့ပါသည်။ ကြွရောက်လာကြသော ဧည့်ပရိသတ်များကိုလည်း နေ့လယ်စာဖြင့် ဧည့်ခံခဲ့ပါသည်။
မန္တလေး ကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာမှ ရဟန်းတော်များ၏ နှစ်ပတ်လည် ဥပုသ်စောင့်ပွဲ ပြီးစီးခြင်း
မန္တလေး ကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာမှ ရဟန်းတော်များ၏ နှစ်ပတ်လည် ဥပုသ်စောင့်ခြင်းကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ အနီးစခန်းရှိ ဒွန်ဘောစကို ကမ္မဌာန်း ရိပ်သာ၌ မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ ညမှ စတင်ကာ မတ်လ ၂၃ရက်နေ့တွင် အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။ ဥပုသ်ပေးသူမှာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ Rev. Fr. Edlar SVD (Missiologist) ဖြစ်ပါသည်။
စိန်ဗင်းဆင်းဒီပေါလ်အသင်း မန္တလေးသာသနာသို့ ရောက်ရှိခြင်း နှစ်(၁၀၀)ပြည့် ဂျူဗလီပွဲတော်
မန္တလေးသာသနာသို့ ရောက်ရှိခြင်း နှစ်(၁၀၀)ပြည့်
မန္တလေးကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာသို့ စိန်ဗင်းဆင်းဒီပေါလ်အသင်း ရောက်ရှိဖွဲ့စည်းခြင်း နှစ်(၁၀၀)ပြည့် အထိမ်း အမှတ် ပွဲတော်၊ မန္တလေးသာသနာလုံးဆိုင်ရာ စိန်ဗင်းဆင်းဒီပေါလ် ကွန်ဖရင့်များ န၀မအကြိမ် မျက်နှာစုံညီ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ၊ စိန်ဗင်းဆင်းဒီပေါလ် ပြည်တော်ကောင်စီ၏ (၆)လပတ် အစည်းအဝေးများကို အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပ မည်ဖြစ်ပါ၍ လူကြီးမင်းကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ပါဝင်ပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေ့စွဲ အချိန် အကြောင်းအရာ
23.3.12 ပြည်တော်ကောင်စီဝင်များ ရောက်ရှိခြင်း။
24.3.12 (၁၂)နာရီ နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ခြင်း။
24.3.12 မွန်းလွဲ ၁နာရီ မှ ၅ နာရီ ပြည်တော်ကောင်စီ အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း။
24.3.2012 ညနေ၆ နာရီ ညစာသုံးဆောင်ခြင်း
24.3.2012 - မန္တလေးသာသနာကွန်ဖရင့်ကိုယ်စားလှယ်များ ရောက်ရှိခြင်း
25.3.2012 နံနက်(၈)နာရီ ရာပြည့်ကျေးဇူးတင်မစ္ဆား (ကာသီဒြယ်ဘုရားကျောင်း)
25.3.2012 နံနက်(၉း၃၀)နာရီ ပွဲတော်ကျင်းပခြင်း၊ ဧည့်ခံကျွေးမွေခြင်း။ (ကာသီဒြယ်ခန်းမ)
25.3.2012 နေ့လည်(၁၂)နာရီ နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ခြင်း
25.3.2012 (မွန်းလွဲ၁နာရီမှ ၅နာရီ) ကွန်ဖရင့်များ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ (ကာသီဒြယ်ခန်းမ)
25.3.2012 ညနေ(၆)နာရီ ညစာသုံးဆောင်ခြင်း
မှတ်ချက် (၁) ကွန်ဖရင့်ကိုယ်စားလှယ်များ စိန်မိုက်ကယ်၊ သံဝင်းခန်းမ၌ တည်းခိုရန်၊ အစီရင်ခံစာနှင့် ငွေစာရင်းယူလာရန်
(၂) ပြည်တော်ကောင်စီဝင်များ ကာသီဒြယ် (၆)ထပ်၌ တည်းခိုရန် (ရွှေနှလုံးတော်ကာသီဒြယ် ၈၂လမ်း၊ ၂၅-၂၆ လမ်းကြား၊ မန္တလေး)
မန္တလေးကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ၏ တွဲဖက်ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် နီကောလားစ် မန်းထန် အား ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသည့် မစ္ဆားတရားနှင့် အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း၊
၁၅.၃.၂၀၁၂ ညနေ ၅း၃၀ နာရီတွင် မန္တလေးမြို့ ရွှေနှလုံးတော် ကာသီဒြယ် ဘုရားကျောင်းတော်ကြီး၌ မန္တလေး
ကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ၏ တွဲဖက် ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် နီကောလားစ် မန်းထန်အား ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသည့် မစ္ဆားတရားနှင့် အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ မစ္ဆားတရားကို မန္တလေးဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး ပေါလ် ဇိန်ထုန်းဂရောင်မှ ဦးဆောင်ပူဇော်ပြီး တွဲဖက် ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး နီကောလားစ် ဦးမန်းထန်နှင့် မန္တလေးသာသနာမှ ရဟန်းတော်များ၊ စလေးရှင်းဂိုဏ်းမှ ရဟန်းတော်များ၊ လာဇလက်ဂိုဏ်းမှ ရဟန်းတော်များ စုစုပေါင်း (၂၉)ပါး၊ ဂိုဏ်းပေါင်းစုံမှ သီလှရှင်များ၊ ဘာသာတူများ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။ ဧ၀ံဂေလိကျမ်းစာ ဖတ်ကြားပြီးနောက် မန္တလေး ကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး ပေါလ်ဇ်ိန်ထုန်းဂရောင်မှ အဖွင့်စကားနှင့် ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်စကား မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။ ရွှေနှလုံးတော် ကာသီဒြယ် ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး Rev. Fr. John U Aye Kyaw မှ ရဟန်းမင်းကြီး ဘေနဒစ် (၁၆) အရှင်သူမြတ်၏ ဟားခါးဂိုဏ်းအုပ်ဆရာတော် နီကောလားစ် ဦးမန်းထန်ကို မန္တလေး ကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ၏ တွဲဖက်ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်အဖြစ် ခန့်အပ်ကြောင်း သ၀ဏ်လွှာကို မူရင်း လာတင်းဘာသာမှ မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆို၍ ဖတ်ကြားခဲ့ပြီး မူရင်း သ၀ဏ်လွှာကို ရဟန်ုးတော်များနှင့် ပရိသတ်များအား ပြသခဲ့ပါသည်။ မန္တလေးသာသနာအတွင်းရှိ ကက်သလစ် ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဘာသာတူများမှ တွဲဖက်ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် နီကောလားစ် ဦးမန်းထန်အား လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ ဆက်သကြပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် Higher Education မှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများက အင်္ဂလိပ်သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြင့် သီဆိုဂုဏ်ပြုကြပါသည်။ ထို့နောက် တွဲဖက်ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် နီကောလားစ် ဦးမန်းထန်မှ မိတ်ဆက်အမှာစကား ပြန်လည် မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ မစ္ဆားတရားကို ပူဇော်ခဲ့ပြီး ညနေ ၇း၀၀ နာရီခန့်တွင် ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။ မစ္ဆတရားအပြီး၌ ကြွရောက်လာကြသော ရဟန်းတော်များ၊ သီလှရှင်များအား ရဟန်းတော်များ ဆွမ်းစားဆောင်တွင် ညစာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပါသည်။။
Valentine's Day ချစ်သူများနေ့
မြင်းခြံမြို့ လူငယ်များရဲ့ Valentine's Day ချစ်သူများနေ့ အခမ်းအနားကို ၁၄.၂.၂၀၁၂ နေ့ နံနက် ၆း၄၅ နာရီတွင် Solemn Mass ဖြင့် စတင်၍ ကျောင်းထိုင်ဖာသာရ် ပြုံးချိုမှ ယေဇူးဘုရား၏ အသွေးတော် အသားတော်ဖြင့် အားသစ်လောင်းပေး၏။ ည ၆း၃၀နာရီတွင် မယ်တော်ဂူလှိုဏ်ရှေ့တွင် လူငယ်များ၊ လူကြီးများ၊ ကလေးများပါ အတူတကွ စိပ်ပုတီး ၂၀ စိပ်ခြင်းနှင့် မုန့်ဟင်းငါးဖြင့် ဧည့်ခံ၏။
ည ၇း၀၀ နာရိတွင် လုဒ်သခင်မ ခန်းမဆောင်ျတွင် Valentine's Day ချစ်သူများနေ့ အခမ်းအနားကို အဖွင့်မေတ္တာ သီဆိုခြင်း၊ လူငယ်များမှ ``ကိုယ်တော်ခေါ် ခေါ်နေသည်´´ သီချင်းဖြင့် ဖျော်ဖြေခြင်း၊ လူငယ်များမှ ဖာသာရ်အား လက်ဆောင်ပေးခြင်း၊ ဖာသာရ်မှ လူငယ်အသင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း (၃)နှစ်ပြည့် အားပေးစကား ပြောကြားခြင်း၊ လုဒ်မယ်တော်ဂူလှိုဏ်ပွဲ ပန်းအလှပြင် ဖန်တီးသူ မောင်ဇော်မျိုးနွယ်အား ဂုဏ်ပြုလွှာ ပေးအပ်ခဲ့၏။
လူငယ်အတွင်းရေးမှူး မမီမီဇော်မှ ဘဏ္ဍာရေး ရှင်းလင်းဖတ်ကြားခြင်း၊ Organ လှူဒါန်းခြင်း၊ လူငယ်များမှ ပေါင်မုန့် ကိုယ်စီ စားသုံးခြင်းဖြင့် ချစ်သူစုံတွဲ နှစ်တွဲ ရွေးချယ်ပြီး စင်မြင့်ပေါ် အပြန်အလှန် ရင်ထိုးထိုးပေးခြင်း၊ အာဒန် ဧ၀ ရွေးချယ်ရာ မောင်ရေမွန်၊ မနိုနိုတို့ ရရှိပြီး သာသနာ အကျိုးဆောင် ဦးခင်ဆက်၊ ဒေါ်ခင်မာဝင်းတို့မှ ဘုရင်၊ ဘုရင်မ စလွယ်များ ဆွဲပေးခြင်း၊ သရဖူဆောင်းပေးခြင်း၊ ရွေးချယ်ခံရသူ နှစ်ဦးမှ လက်ချိတ် လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ လမင်းချစ်သူ သီချင်းဖြင့် တေးသရုပ်ဖော်ခဲ့၏။ ချစ်သူများနေ့ ဂုဏ်ပြု စုံတွဲတေးများ CD OKသီချင်းများ သာသနာ့ အကျိုးဆောင် ဦးဝင်းလှိုင်မှ သီဆိုခြင်း လူငယ်များမှ တဦးစီ သီဆိုခြင်း ``ကိုယ်တော်ခေါ် ခေါ်နေသည်´´ သီချင်းဆိုကာ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။
မန္တလေးဂိုဏ်းချုပ်သာသနာအတွက် တွဲဖက် ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် (Coadjutor Archbishop) တစ်ပါးရရှိခြင်း
မန္တလေးဂိုဏ်းချုပ်သာသနာအတွက် တွဲဖက်ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် (Coadjutor Archbishop) တစ်ပါးရရှိခြင်း ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဘေနဒစ် (၁၆)အရှင်သူမြတ်မှ နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့တွင် မန္တလေး ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာတော်အတွက် ယခုလက်ရှိ ဟားခါးဂိုဏ်းအုပ်ဆရာတော် Msgr. Nicholas Mang Thang အား မန္တလေးဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ၏ တွဲဖက်ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် (Coadjutor Archbishop) အဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ဘုန်းတော်ကြီး Msgr. Canute ဦးလွန်းအောင် ပျံလွန်တော်မူခြင်း
1 1 ဘုန်းတော်ကြီး Msgr. Canute ဦးလွန်းအောင်၏ ဈာပန အခမ်းအနားကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၇ (ကြာသပတေးနေ့) ညနေ ၃း၀၀ နာရီအချိန်တွင် မန္တလေးမြို့ေ၇ွှနှလုံးတော် ကာသီဒြယ် ဘုရားကျောင်းတော်ကြီးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဂျွန် ကိုစိုးနိုင်မှ ဘုန်းတော်ကြိး Msgr. Canute ဦးလွန်းအောင်၏ ထေရုပ်ပတ္တိအကျဉ်းကို ဖတ်ကြားပြိးသည့်နောက် Dr. Leo မှ ကလေးဂိုဏ်းအုပ်သာသာနာမှ ဂိုဏ်းအုပ်ဆရာတော် Bishop Felix Lian Khen Thang ထံမှ ၀မ်းနည်းကြောင်း သ၀ဏ်လွှာကို ဖတ်ကြားပါသည်။ ဈာပနအခမ်းအနားသို့ အင်္ဂလီကန် ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါး တက်ရောက် ဂါရ၀ ပြုခဲ့ပါသည်။ နာရေး မစ္ဆားတရားတော်မြတ်ကို မန္တလေးဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး Archbishop Paul Zinghtung Grawng မှ ဦးဆောင်ပြီး ရဟန်းတော် ၄၅ ပါးနှင့် ဦးပဉ္ဖင်းကြီး၊ Augustine ဇော်ထွန်း၊ သီလှရှင်များ နှင့် ဘာသာတူ ၁၀၀၀ ကျော်ခန့် တို ပါဝင်ပူဇော်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ဈာပန အခမ်းအနားကို မန္တလေးမြို့ ရွှေနှလုံးတော် ကာသီဒြယ် ကျောင်းထိုင် Rev. Fr. John ဦးအေးကျော်မှ ဦးဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဘုန်းတော်ကြီး Msgr. Canute ဥိးလွန်းအောင်၏ ကြွင်းကျန်ရစ်သည့် ရုပ်ကလပ်ကို မန္တလေးမြို့ ကြာနီကန်ရှိ ကက်သလစ် သုဿာန်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။
ဘုန်းတော်ကြိး Msgr. Canute ဦးလွန်းအောင်၏ ထေရုပ်ပတ္တိအကျဉ်း
ဘုန်းတော်ကြီး Msgr. Canute ဦးလွန်းအောင်သည် (1936)ခု၊ ဇန်န၀ါရီလ (၈)ရက်နေ့တွင် ချောင်းရိုးရွ္ပာ၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖနှစ်ပါးမှာ ဦးရင်အောင်း+ဒေါ်လှခင်တို့ ဖြစ်သည်။ ချေင်းရိုးရွာရှိ မူလတန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားပြီးနောက် (၁၉၅၀) ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၀)ရက်နေ့တွင် ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ အခြေခံရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းသို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ (၁၉၅၁)
ခုနှစ်တွင် စိန်အဲလ်ဘတ် အထက်တန်းကျောင်းတွင် ငါးတန်းမှစ၍ ပညာသင်ကြားခဲ့ရာ (၁၉၅၆)ခုနှစ်တွင် (၁၀)တန်း အောင်ခဲ့သည်။ (၁၉၅၇)ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ(၁)ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်ရဟန်းဖြစ်တက္ကသိုလ်သို့ အဦးဆုံး ၀င်ရောက်သော ကျောင်းသား(၈)ယောက်
အနက် တစ်ယောက်အပါအ၀င် ဖြစ်သည်။ (၁၉၅၈)ခုမှ (၁၉၆၄) ခုနှစ် အထိ အမေရိကန် ဂျေဇုအစ်ဂိုဏ်း ဘုန်းတော်ကြီးများ လက်အောက်တွင် ပညာသင်ယူပြီး (၁၉၆၄)ခုနျစ် ဧပြီလ(၈)ရက်နေ့တွင် ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ စိန်အာလောရှက် ရဟန်းဖြစ် သင်ကျောင်း၏ ရွှေရတုသဘင်၌ ရဟန်းသိက္ခာခံယူခဲ့သည်။ မြန်မာပြည်တွင် ဖွင့်လှစ်သော ရဟန်းဖြစ်တက္ကသိုလ်၏ ကနဦးရဟန်း(၆)ပါးအနက် တစ်ပါးအပါအ၀င် ဖြစ်သည်။
ရဟန်းသိက္ခာခံယူပြီးနောက် ကလေးမြို့တွင် လက်ထောက်အဖြစ် အမှုထမ်းစဉ် ချင်းပြည်နယ် ဆိုင်းဇံရွာတွင် သုံးလတာ ချင်းစကား သင်ယူခဲ့သည်။ (၁၉၆၅)ခုနှစ်တွင် ဖာသာရ် ဦးမြအောင်နှင့်အတူ တီးတိန်မြို့မှာ နေပြီး အကူအညီပေးခဲ့သည်။ ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်
အေ ဦးဘခင်လက်ထက် (၁၉၆၆)ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ(၁)ရက်နေ့မှ ဧပြီလ(၂၈)ရက်နေ့အထိ လေးလတာမျှ ဖလမ်းတွင် တာဝန်
ထမ်းဆောင် ရပြီးမေလမှ စ၍ ရန်ကုန်ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ကာ စာချပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည်။ (၁၉၇၇)ခုနှစ်တွင် ကလေးမြို့ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည်။
ကလေးမြို့ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် လူငယ်များ၏ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ အထွေထွေ ဗဟုသုတရရှိစေရန်နှင့် နှစ်စဉ်လူငယ်ပွဲတော်ကို ကျင်းပပေးခဲ့သည်။ ဓမ္မဆရာများ၊ သာသနာ့အကျိုးတော်ဆောင် လူကြီးများ သင်တန်းကိုလည်း တစ်ရွာပြီးတစ်ရွာ နှစ်စဉ် အလှည့်ကျ ကျင်းပပေးခဲ့သည်။ ဓမ္မဆရာများနှင့်အတူ ကျေးရွာများကို ခရီးလှည့်လည်ခြင်းဖြင့် ဘာသာတူများကို စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေပြီး ဘာသာမှု၌ ခိုင်မြဲစေခဲ့သည်။ ကလေးမြို့တွင် အုတ်ဘုရားကျောင်း ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ (၁၉၉၁)ခုနှစ် ဂျွန်လ(၇)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ စိန်ဂျိုးဇက် ဘုရားကျောင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့၍ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်သည်။ (၁၉၉၇)ခုနှစ်မှ စ၍ မန္တလေး ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ၊ ဂိုဏ်းထောက်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည်။ မန္တလေးမြို့ စိန်ဂျိုးဇက်အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော
စိန်ပန်း၊ တံခွန်တိုင်၊ မြို့ဟောင်းနှင့် စိန်ဂျွန်း ဘာသာဝင်များကိ ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ မန္တလေးသာသနာ အိမ်မြေယာထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ လဖုန်းရပ်ကွက်တွင် လူနေတိုက်ခန်းတစ်လုံးဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့သည်။ စိန်ဗင်းဆင်း
ဒီပေါလ် မန္တလေးသာသနာအုပ်စုကောင်းစီ၏ စားရင်းစစ်အဖွဲ့ ဥက္ကဌအဖြစ်လည်းကောင်း၊ မာရီယားတမန်တော်ကူရီးယား၏ ၀ိညာဉ်လမ်းညွန်အဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ (၂၀၀၂) မေလမှစ၍ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ ရွှေနှလုံးတော်ဘုရားကျောင်း၏ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့အမှုထမ်းဆောင်
သက်တော် (၇၅) နှစ်၊
2011 ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၅)့ရက်၊ နံနက် (၁၀း၃၀)နာရီ အချိန်တွင် မန္တလေးမြို့၊ ရွှေနှလုံးတော် ကာသီဒြယ်၊ ဆရာတော်ကြီး ကျောင်းတိုက်တွင် ပျံလွန်တော်မူသည်။
O Lord, My God, let Your perpetual light shine upon him and may he rest in peace. Amen.
၇/၂၀၁၁ ကြိမ်မြောက် အာဗီအေ မေတ္တာအားမာန်သောတရှင်များအသင်း အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း သတင်း။
၇/၂၀၁၁ ကြိမ်မြောက် အာဗီအေ မေတ္တာအားမာန် သောတရှင်များအသင်း အစည်းအဝေးကို မန္တလေး ကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ မြောက်ကိုင်းသာသနာအုပ်စုတွင် ၃၀.၁၀.၂၀၁၁ က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
အစည်းအဝေးကို မြောက်ကိုင်းသာသနာအုပ်စု၊ သာသနာ့ခန်းမဆောင် တွင် နံနက် ၁၀း၃၀တွင် စတင် ကျင်းပခဲ့ကြ ပါသည်။
အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်သူ စုစုပေါင်း ၉၅ဦး ရှိပါသည်။ ဦးစွာ အစည်းအဝေးကို မေတ္တာအားမာန်အသင်းမှ အတွင်းရေး မှူးဖြစ်သူ ဒေါ်လီမှ မြောက်ကိုင်း သာသနာအုပ်စု၏ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးနှင့် တကွ ချမ်းသာကုန်းသာသနာ မှ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများအား နေရာယူရန် ဖိတ်ခေါ်ပြီး၊ အခမ်းအနားကို တက်ရောက် လာကြသည့်သူများ အားလုံး မိမိတို့ သက်ဝင်ယုံကြည်သည့် ဘာသာတရား အတိုင်း တိတ်ဆိတ်စွာဖြင့် ဆုတောင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ကာ ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် အစပြုခဲ့ကြပါသည်။
ထို့နောက် မြောက်ကိုင်းသာနာအုပ်စုမှ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးမှ အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ယခုကဲ့သို့ လာရောက် ကာ အာဗီအေ မေတ္တာအားမာန် သောတရှင်များအသင်း အစည်းအဝေးကို လာရောက် ကျင်းပသည့် အတွက် ကျေးဇူးတင် ၀မ်းမြောက်ပါကြောင်း၊ ယခုအစည်းအဝေးမှ သိရှိရသော အကြောင်းအရာများကို နားထောင်ကြားသိ ရပြီးနောက် မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် သာသနာပြုများ၊ သတင်းကောင်း ဟောပြောသူများ ဖြစ်လာကြပါရန် မျှော်လင့်ကြောင်း တိုက်တွန်း စကား ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် အကျိုးဆောင်ရုံးများ၏ တာဝန်ခံ သီလရှင်စီစီလျားစန်းယုမော်မှ စကားပြောကြားရာတွင် ယခုလို သိုက်သိုက် ၀န်းဝန်း စုံစုံညီညီဖြင့် တက်ရောက်တာ တွေ့ရသည့်အတွက် အရမ်းကို အားရမိပါကြောင်း၊ အာဗီအေ ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာတွေ လုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတာကို သိစေချင်ပါကြောင်း၊ တိုတိုနှင့် လိုရင်း ကိုပြောရပါက အာဗီအေဆိုသည်မှာ အာရှသမ္မာတရား အသံလွှင့်ဌာန တစ်ခုဖြစ်ပြီး။ ခရစ်တော်၏ ဧ၀ံဂေလိ သတင်းကောင်းကို လေလှိုင်းမှတဆင့် ဖြန့်ဝေကာ သာသနာပြုခြင်း ဖြစ် ပါကြောင်း၊ ဘာသာပြုခြင်း မဟုတ်ပါကြောင်း၊ သာသနာပြုခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ တည်ရှိ် ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေနှင့် ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း ၊ မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များ ပါဝင်ကာ ထုတ်လွှင့်လျက် ရှိပါကြောင်း။ ကျွန်မတို့ ဖန်ဆင်းခံ လူသား တစ်ဦးချင်း တစ်ယောက်စီတိုင်းဟာ ရုပ်နှင့်နာမ် ပေါင်းစပ်လျက်ရှိရာ။ ရုပ်ခန္ဓာ အတွက် အစာအဟာရ လိုအပ်သလို၊ နာမ်ဝိညာဉ် အတွက်လည်း လိုအပ်ပါကြောင်း၊ အာဗီအေအနေနှင့်တရားဒေသနာတော် များ၊ သာသာရေး အမေးအဖြေကဏ္ဍ၊ အသီးတရာ အညှာတစ်ခု၊ ကိုယ်ကျင့်တရား လမ်းညွှန်ကဏ္ဍ၊ သာယာစိုပြေ ကျေးလက်မြေ ကဏ္ဍ၊ မေတ္တာတေးလက်ဆောင်၊ အာရှအမျိုးသမီးကဏ္ဍ၊ လူငယ်ကဏ္ဍ၊ ကိုယ်ကျန်းမာမှ စိတ်ချမ်းသာ စသည့် ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်ရာကဏ္ဍ စသဖြင့် ကဏ္ဍများကို ထုတ်လွှင့်လျက် ရုပ်၊ နာမ် နှစ်ပါးစလုံးအတွက် အာဟာရ များ ဖြည့်ဆည်းပေးရင်း၊ သာသနာပြုလျက် ရှိပါကြောင်း၊ ယခုလက်ရှိ တာဝန် ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော သူများမှ ၄င်းကဏ္ဍ များကို တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်နေကြသလို၊ သောတရှင်များထဲမှလည်း မိမိတို့ စွမ်းဆောင်နိုင်သည့် ကဏ္ဍ၊ မှပါဝင် ကာ သောတရှင်များ ကိုယ်တိုင်မှ အစီအစဉ်ထုတ် လုပ်သူများ အဖြစ် ပါဝင်ကာ လူသားတို့အား သာသနာပြုများခြင်းတွင် ကိုယ်တိုင် ပါဝင် လာကြပါရန်၊ ဖိတ်ခေါ် ပါ ကြောင်း။ ယခုပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေးမှာ အာဗီအေ မေတ္တာ အားမာန် သောတရှင်များ အသင်း၏ လစဉ် အစည်းအဝေး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၄င်းအသင်းကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်က- သောတရှင်များ အချင်းချင်း ခိုင်မာ သန့်ရှင်း မြင့်မြတ်သည့် ဆက်သွယ်မှုများ ရရှိစေပြီး၊ စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ၀ိညာဉ်ရေးစသည့် လူသားတို့၏ အခြေခံ လိုအပ်ချက်များကို မိမိတို့ တတ်နိုင်သည့်ဖက်မှ ၀ိုင်းဝန်း ကူညီနိုင်ရန်၊ ထိုလူမှုရေးများ လုပ်ငန်းများ တွင် ပါဝင် လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် အာရှသမ္မာတရား အသံလွှင့်ဌာန၏ သာသနာပြုခြင်း အမှု၌ပါဝင်ရန်၊ လူသား တစ်ဦး ချင်းစီတိုင်း လိုလားတောင်းတကြသည့် ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို မေတ္တာတရားအားဖြင့် ရရှိရန်စသည့် ရည်ရွယ်ချက် များဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း၊ ၄င်းအမည်ကို လူမျိုးစုံ၊ ဘာသာစုံမှ ၀ိုင်းဝန်း အကြံပြုချက်ဖြင့် မေတ္တာအားမာန် ဟု မှည့်ခေါ်ခဲ့ပါကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြား ပါသည်။
ထို့နောက် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရင်းနှီးမှု ရရှိကြရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တက်ရောက်လာကြသူများ အုပ်စုလိုက် မိတ်ဆက်ကြ ပါသည်။
ထို့နောက် အတွင်းရေးမှူးဒေါ်လီမှ ယခင်အပတ်မှ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ဖတ်ကြားတင်သွင်းကာ ဥက္က္က္ထဌ ကိုဝဏ္ဍဘုန်း မှ အတည်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုးပါသည်။
နေ့လည် ၁၁း၃၀ တွင် နေ့လည်စာသုံးဆောင်ရန် အစည်းအဝေးကို ခေတ္တရပ်နားပြီး ကျောင်း ထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး ပတ်ထရစ် ဦးကျော်လင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ သာသနာအမှုဆောင် ဥက္က္ကဌ ဦးထွန်းညိုတို့ ဦးစီးကာ ပြင်ဆင် တည်ခင်း ကျွေးမွေး သည့် နေ့လည်စာကို သုံးဆောင်ကြပါသည်။
ထိုနောက် နေ့လည် ၁း၃၀ တွင် အစည်းအဝေးကို ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါသည်။ ဦးစွာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး သီလရှင်စီစီလျားစန်းယုမော်မှ လာမည့် ဇန်န၀ါရီ ၁၄ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် စနေနေ့တွင် မန္တလေး ကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ် သာသနာ ခန်းမဆောင်၌ ကျင်းပပြု လုပ်မည့် ဖြစ်ကြောင်း၊ စတင်မည့်အချိန်ကို နံနက် ၉း၀၀ သတ်မှတ်လိုကြောင်း တင်ပြရာ အားလုံးက သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။ နေ့လည်စာကို ဒံပေါက် (သို့) တခြားသင့်တော်ရာ တစ်ခုခုကို ပြုလုပ်ရန် တင်ပြရာ တက်ရောက်လာသူများမှ ထမင်းဆီဆမ်းနှင့် ကြက်သားကြော်နှင့် အအေးကို အကြမ်းပြင်း သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ပွဲတော် အစီအစဉ်များကို စနစ်တကျ ပြုလုပ်ပါရန်။ ဧည့်ကြို အတွက် သံဝင်းသာသနာအုပ်စုနှင့် စိန်ဇေးဗီးယား အုပ်စုမှ လည်းကောင်း လိုအပ်ပါက ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူမှ အသင်းသို့ လိုအပ်ဦးရေ တင်ပြတောင်းဆိုရန်၊ တက်ရောက်သူ များ စာရင်းပြုစုခြင်းကဏ္ဍကို နန်း ရေ့မှ မသိင်္ဂီနှင့် အဖွဲ့မှ တာဝန်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများမှာ တာဝန် ယူကြသည့်သူများ စာရင်းကို နောက်ကျင်းပမည့် အစည်းအဝေးတွင် ပေးသွင်းပါရန် သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။
ရေဒီယိုကို မဲဖေါက်ပေးခြင်း ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးရာတွင် ရပ်ဝေးမှ တက်ရောက်လာကြသူများနှင့် ရဟန်း သံဃာတော်များအား မဲမနှိုက် ပဲပေးရန်။ ကျန် တက်ရောက်သူများအား ကုမဏီများ ပြုလုပ်သည့် အတိုင်း စနစ်တကျဖြစ်စေ ရန်။ အမည်စာရင်းပေးသွင်းသည့် စဉ်ကပင် မဲလိပ်ကိုပါ တခါတည်းပေးပါရန်။ ဥက္ကဌ၏ တင်ပြချက်ကို အားလုံးက သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။ ထို့နောက် အာဗီအေ၏ ထာဝရငွေပဒေသာပင်နှင့်ပတ်သက်၍ သီလရှင်စီစီလျားစန်းယုမော်မှ ရှင်းလင်းတင်ပြရာ- အာဗီအေမှ ၊အသံလွှင့် ကုန်ကျစားရိတ်မှ တစ်မိနစ်ကို ၈ဒေါ်လာဖြစ်ကြောင်း၊ ထောက်ပံ့ကြေးများ လျှော့လာကြောင်း၊ နောက်ဆုံးတွင် မိမိတို့ ကိုယ်တိုင်ရပ်တည်နိုင်ရေး၊ အသံလွှင့်ခြင်း အစီအစဉ်ကို ရပ်ဆိုင်းမသွားစေပဲ ဆက်လက် သာသနာပြု လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ဘုန်းတော်ကြီး ဒိုမိနစ် ဦးဂြိုလ်တုနှင့် ဘုန်းတော်ကြီး ဂေးဗြီးအဲလ်ဦးထွန်းမြင့် တို့မှ ထည့်ဝင်´´မ``တည်ကာ သောတရှင်များ၏ ထည့်ဝင်မှုများဖြင့် ပေါင်းစပ်လျက် ဘဏ်၌ ´´အာဗီအေမြန်မာဘာသာ အစီအစဉ် ထာဝရငွေ ပဒေသာပင်`` အမည်ဖြင့် စိုက်ထူထားပါ ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။
ထို့နောက် မေတ္တာအားမာန် သောတရှင်များအသင်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် တိုး တက်လာပါကြောင်း ၊ ထိုကဲ့သို့သော အသင်းများ တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ပထမခြေလှမ်း အနေနှင့် မြောက်ကိုင်း၊ မြစ်ငယ်၊ ဇော်ဂျီ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည့် ဦးလှဝင်း၏ အကူအညီဖြင့် မြောက်ကိုင်းတွင် သောတရှင်အသင်း၏ အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါ ကြောင်း။ သို့ဖြစ်၍ သောတရှင်များ အသင်းတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းကာ အမှုတော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် စဉ်းစားကြရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။
ဦးလှဝင်းမှ ပြန်လည်ကာ မိမိတို့အနေဖြင့် သောတရှင်များ အသင်းတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းရန် ဆန္ဒရှိကြပါကြောင်း၊ အမာခံများ ကိုလည်း ရွေးချယ်ထားပါကြောင်း၊ သို့သော် လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်များနှင့် ပတ်သက်၍ သိကျွမ်း နားလည်မှု နည်းပါးသေးသဖြင့် လက်ရှိမေတ္တာအားမာန် အသင်းနှင့် ဦးစွာ တွဲဖက် လုပ်ကိုင်လိုပါကြောင်း တင်ပြပါသည်။ ၄င်း၏ တင်ပြချက်ကို အားလုံးမှ သဘောတူလက်ခံ အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။
ထို့နောက် အတွင်းရေးမှူးမှ သောတရှင်တွေ့ဆုံပွဲကို လစ်လပ်မှုမရှိပဲ စနစ်တကျ ပြုလုပ်သွားနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ကဏ္ဍများတွင် တာဝန်ယူမည့်သူများ စာရင်းအတိအကျ ပေးသွင်းပြီး မိမိတာဝန်ကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ကြပါရန် တိုက်တွန်းပြော ကြားခြင်း၊ အသင်းအနေဖြင့် လစဉ် အစည်းအဝေးမှ ကောက်ခံရရှိသည့် လျှို့ဝှက် အလှူငွေမှ တစ်ဝက်ကို ထာဝရငွေ ပဒေသာပင်အတွက် လည်းကောင်း၊ ကျန်ရှိငွေကို သာရေး၊ နာရေးများအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ကူညီပေးပါကြောင်း၊ သောတရှင်များမှ နာရေး၊သာရေးနှင့် အခြား လိုအပ်သည့် အကူအညီများရှိပါက အသင်းသို့ သတင်းပေး ပို့ကြပါရန်၊ ပြီးခဲ့သည့် အစည်းအဝေး၌ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း ၊ခေါ်တော်မူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း ဆုတောင်းပေးရန် အကူအညီတောင်းခဲ့သူများ အတွက် အသင်းမှ ဆုတောင်းပေးခြင်း တတ်နိုင်သည့် ဖက်မှ ကူညီခြင်းများ ပြုလုပ် ခဲ့ကြပါကြောင်း၊ ပြီးစီး လုပ်ငန်းရပ်များကို တင်ပြ အစီရင်ခံပါသည်။
ထို့နောက် ရသုံးငွေရှင်းတမ်းကို တင်ပြရာ အသင်း စတင်ဖွဲ့စည်းသည်မှ ယခင်လအစည်းအဝေး ထိတိုင် စုစုပေါင်း လျှို့ဝှက်ကောက်ခံ ရရှိငွေမှာ ၁၄၉၀၅၀ (တစ်သိန်းလေးသောင်းကိုးထောင်ငါးဆယ်ကျပ်) ဖြစ်ပြီး ၄င်းမှ အသင်း၏ သတ်မှတ်ချက် အတိုင်း နာရေးအတွက် တစ်သောင်း၊ သာရေး အတွက်တစ် သောင်းစီဖြင့် ကူညီခဲ့ရာ စုစုပေါင်း ကူညီငွေ ၆၅၀၀၀ (ခြောက်သောင်းငါးထောင်) ကျပ်နှင့် ထာဝရငွေ ပဒေသာပင်အတွက် ၈၇၀၀ ကျပ်နှုတ်ပြီး လက်ကျန်ငွေ ၇၅၃၅၀ (ခုနှစ်သောင်း ငါးထောင် သုံးရာငါးဆယ်) ကျပ်၊ ထာဝရငွေပဒေသာပင်အတွက် စုစုပေါင်းရရှိငွေ ၅၀၇၀၀(ငါးသောင်းခုနှစ်ရာ) ကျပ် ရှိပါကြောင်း၊ ၄င်းကို သီလရှင် စီစီလျားစန်းယုမော်ထံတွင် အပ်နှံထားပါကြောင်း ရှင်းလင်း တင်ပြပါ သည်။
ထို့နောက် အသင်းရံပုံငွေ အတွက် လျှို့ဝှက် အလှူငွေနှင့် ထာဝရငွေပဒေသာပင် အတွက် အလှူကို ကောက်ခံရာ-လျှို့ဝှက်အလှူငွေ ၂၀၀၅၀(နှစ်သောင်းငါးဆယ်) ကို လည်းကောင်းရရှိပြီး။ ၄င်းမှ၁၀၀၀၀ (တစ်သောင်းကျပ်) ကို ထာဝရငွေပဒေသာပင် အတွက် လည်းကောင်း။ ထာဝရငွေပဒေသာပင် အတွက် သီးသန့်ကောက်ခံငွေ ၄၆၀၀၀ (လေးသောင်းခြောက်ထောင်)ကျပ် ရရှိပါသည်။ ၄င်းကောက်ခံရရှိ ငွေကို သီလရှင် စီစီလျားစန်းယုမော်အား ဥက္ကဌ ကိုဝဏ္ဍဘုန်းမှ အပ်နှံခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် အတွင်းရေးမှူးမှ တက်ရောက် လာသူများအား အစည်းအဝေး တက်ရောက်ခြင်းကြောင့် မိမိ ခံစားရသည့် ခံစားချက်ကို ဝေမျှပေးရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ရာ စိန်ဂျွန်းသာသနာအုပ်စုမှ ဒေါ်ချိုချိုဝင်းမှ ၄င်းအနေဖြင့် တက်ရောက် ခွင့်ရသည့် အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း၊ မိမိသည်ေ ရဒီယို အမြဲနားဆင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ယခု တက်ရောက်ပါဝင်ရသည့် အတွက် မိတ်ဆွေများလည်း တိုးပွားလာပါကြောင်း၊ အာဗီအေသောတရှင်အသင်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို အားရမိပါကြောင်း။ မိမိအနေနှင့် နောက်ပိုင်းတွင် ပို၍ ပါဝင်နိုင်ရန် ကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း။
ချမ်းသာကုန်းမှ တက်ရောက်သူများထဲမှ ကိုသောမတ်စ်မှ မိမိအနေနှင့် သောတရှင်အသင်းတွင် ပါဝင် ဖို့ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း၊ တတ်နိုင်သည့်ဖက်မှ ပါဝင်ဖို့ရန် သိရှိ ခဲ့ရပါကြောင်း -
မြောက်ကိုင်းမှဒေါ်ဧလိဇဘက် သန်းသန်းအေးမှလည်း မိမိတို့၏ ရွာမှာ ယခုလို တကူးတက လာရောက်ကာ အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်သည့်အတွက် ၀မ်းသာ ကြိုဆိုပါကြောင်း၊ အာဗီအေနှင့်ပတ်သက်သည့် အသိ မိတ်ဆွေများ တိုးပွါး ရရှိ လာရပါကြောင်း၊ နောင်တွင် မိမိအနေနှင့် တတ်နိုင်သည့်ဖက်မှ ပါဝင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသီးသီး ဝေငှကြပါသည်။
ထို့နောက် သီလရှင် စီစီလျားစန်းယုမော်မှ ကျေးဇူးတင် စကားပြောကြားရာ- ဘုရားရှင်အား ဦးစွာ ကျေးဇူး တင်ပါကြောင်း၊ မြောက်ကိုင်း သာသနာ၌ ပြုလုပ်ရန် အခွင့်ပေးခဲ့ပြီး အစစအရာရာ ကူညီပေးခဲ့ သည့် ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးနှင့် တကွ၊ မြောက်ကိုင်းသာသနာ၏ အမှုဆောင် ဦးထွန်းညိုနှင့် ရွာသူ၊ ရွာသားများ၊ မြစ်ငယ်မှ ဦးလှဝင်းနှင့် အဖွဲ့ အားလုံးတို့အား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း၊ ကျောင်းထိုင်ဘုန်း တော်ကြီးမှ မိမိ၏ သာသနာအတွင်းမှ အရည်အချင်းရှိသော သူများအား မိမိတို့ တတ်စွမ်းနိုင်သည့်ဖက်မှ အာဗီအေ အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်အားဖြည့်ကြပါရန် တိုက်တွန်းနိုးဆော် ဆက်သွယ်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံရင်း အရာအားလုံးအတွက် ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် အတွင်းရေးမှူးဒေါ်လီမှ နောက်လာမည့် နိုဝင်္ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့၊ အာဗီအေ ရုံး၌ နံနက် ၉း၀၀ တွင် ၈/ ၂၀၁၁ ကြိမ်၏အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာ ပြီး အာဗီအေ မေတ္တာအားမာန်အသင်း၏ ၇/၂၀၁၁ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးဆုံး ကြောင်း ကြေငြာပြီး အမှတ်တရ မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကာ အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ အဆုံးသတ် ခဲ့ကြပါသည်။
စိပ်ပုတီး၏ မယ်တော်သခင်မ ပွဲတော် (ချမ်းသာကုန်း) နှင့် ဦးပဉ္ဇင်းကြီး သိက္ခာတင်ပွဲတော်
Bro. Augustine Zaw Htun ၏ ဦးပဉ္ဇင်းကြီး သိက္ခာတင်ပွဲတော်ကို ၁၂. ၁၀. ၂၀၁၁ တွင် ချမ်းသာကုန်း (ပုလိပ်) စိပ်ပုတီး၏ မယ်တော်သခင်မ ပွဲတော်မြတ်နှင့် ပူးတွဲ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဦးပဉ္ဇင်းကြီးသိက္ခာတော်မြတ်ကို မန္တလေး ဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော်ကြီး ပေါလ်ဇိန်ထုန်းဂရောင်မှ တင်မြှောက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ရဟန်းတော် ၃၈ပါး၊ သီလရှင် ၂၆ပါး၊ ပြင်ဦးလွင် အခြေခံ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းနှင့် စိန်သောမတ်စ် အကြိုရဟန်းဖြစ် တက္ကသိုလ်တို့မှ ကျောင်းသားများ၊ အနီးစခန်းမှ စလေးရှင်း သီလရှင်ကျောင်းသူများ အပါအ၀င်၊ ရပ်နီးရပ်ဝေးမှ ဘာသာတူဦးရေ ၃၀၀၀ ကျော် ပါဝင်တက်ရောက် ခဲ့ကြပါ သည်။ မစ္ဆားတရားတော်မြတ်ကို ဆရာတော်ဘုရားကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီး Fr. Bernard Mya Thein မှ သြ၀ါဒ မိန့်ကြားခဲ့ ပါသည်။ မစ္ဆားတရားတော်မြတ်ပြီးနောက် စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းကိုလည်း တခမ်းတနား ကျင်းပခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်တော်မြတ် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတော်အခမ်းအနားဖြင့် စိပ်ပုတီး၏ မယ်တော်သခင်မ ပွဲတော်နှင့် ဦးပဉ္ဇင်းကြီး သိက္ခာတင် ပွဲတော်ကို အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။
ပုပ်ရဟန်ုးမင်းကြီး ကိုယ်စားလှယ် ဆရာတော်ဂေအိုဗာနီ ဒါနီအဲလဲလို မန္တလေးဂိုဏ်းချုပ်သာသနာသို့ အလည်အပတ် ရောက်ရှိခြင်း
မန္တလေးဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ မန္တလေးမြို့သို့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ပုပ်ရဟန်ုးမင်းကြီး ကိုယ်စားလှယ် ဆရာတော်ဂေအိုဗာနီ ဒါနီအဲလဲလို ၁၇.၉.၂၀၁၁ နေ့တွင် ညနေ ၅း၃၀ နာရီ၌ ကြွရောက်လာရာ ရွှေနှလုံးတော် ကာသီဒြယ်ဘုရားကျောင်း၌ ရဟန်းတော်များ၊ သီလှရှင်များ၊ မြို့ပေါ်ရှိ ဘာသာတူများ၊ စိန်သောမတ်ဆေမီနာရီကျောင်းသားများ၊ အဆင့်မြင့်ဘော်ဒါ (Higher Education Center) ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ ဗမာဝတ်စုံနှင့် လူငယ်နှစ်ဦးမှာ ပန်းစည်းကပ်ပြီး ကြိုဆိုကြပါသည်။
ဂျွန်ဦးအေးကျော်မှ ဘုရားကျောင်းတော်တွင် ဆရာတော် ဂျေအိုဗာနီဒါနီအဲလဲလိုကို ကြိုဆို
နှုတ်ခွန်းဆက်သ၏။ ပုပ်ရဟန်ုးမင်းကြီး ကိုယ်စားလှယ်မှ နှုတ်ဆက်စကား ပြန်လည် ပြောကြားခြင်း၊ ရဟန်းတော်များ၊ သီလှရှင်များ၊ ဘာသာတူများ၊ လိုက်လံနှုတ်ဆက်ခြင်းနှင့် မယ်တော်သီချင်း သီဆိုကာ အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။
ည ၇း၀၀ နာရီတွင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ရဟန်းတော်များ ညစာအတူ စားသုံးကြပါသည်။ ည ၇း၄၅ နာရီတွင် ရဟန်းတော်များနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း၊ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ကိုယ်စားလှယ်မှ သြ၀ါဒ မိန့်ကြားခြင်းနှင့် ရဟန်ုးတော်များ မေးမြန်းချက် များကို ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
၁၈.၉.၂၀၁၁ နေ့ နံနက်၈း၀၀နာရီတွင် ကာသီဒြယ်ခန်းမတွင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ကိုယ်စားလှယ် ဆရာတော်ဂေအိုဗာနီ ဒါနီအဲလဲလို၊ မန္တလေးဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် ပေါလ်ဂရောင်၊ ဆရာတော် ဖိလစ်၊ ဆရာတော်ဖရန်စစ်၊ ဆရာတော် ရေမွန်၊ ရဟန်းတော် ၄၃ပါး၊ တို့ မစ္ဆားတရားတော်မြတ် ပူဇော်ကြပါသည်။ မစ္ဆားတရားတွင် သီလှရှင် ၃၅ ပါး၊ စိန်သောမတ် ဆေမီ နာရီ ကျောင်းသားများ အဆင့်မြင့် ဘော်ဒါ ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် ဘာသာဝင် ၁၀၀၀ ခန့်တို့ တက်ရောက်ကြသည်။ မစ္ဆားတရားအပြီးတွင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကိုယ်စားလှယ်အား မန္တလေးမြို့ အဆင့်မြင့် ဘော်ဒါကျောင်းသားကျောင်းသူများမှ Welcome Song သီဆို နှုတ်ဆက်ခြင်း၊ ဗမာ၊ ကချင်၊ ရှမ်း၊ ချင်း၊ တမဲလ် တို့မှ One and Union တစ်ခုတည်းနှင့် စည်းလုံးခြင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုအကဖြင့် တင်ဆက်ခြင်း၊Dr. Leo မှ Welcome Adddress နှင့် မန္တလေးသာသနာသမိုင်းကြောင်း ဖတ်ကြားခြင်း၊ ကိုကျော်မင်းမှ အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မွန်ဆီညော် မောင်နီမှ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ကိုယ်စား လှယ်အား မန္တလေးသာသနာ ကိုယ်စား လက်ဆောင်ပေးခြင်း၊ မန္တလေးမြို့ပေါ် သာသနာအုပ်စု ၅ အုပ်စုမှ လက်ဆောင်ပေးခြင်း၊ အဆင့်မြင့်ဘော်ဒါမှ We Love You တေးသရုပ်ဖော်ဖြင့် ဂုဏ်ပြုကြသည်။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ကိုယ်စားလှယ်မှ သြ၀ါဒစကားမိန့်ကြားရာ Fr ဂျွန်ဦးအေးကျော်မှ ဘာသာပြန်ဆိုရာ ရဟန်း၊ သီလှရှင်များ၊ ဘာသာတူများ တစ်သံတည်းချစ်ခြင်း၊ အစေခံခြင်း၊ အတူတကွရှိခြင်း၊ လှလှပပ တင့်တင့်တယ်တယ် ရှိခြင်း ကျေးဇူးတင် မှတ်တမ်း တင်ရပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
နံနက် ၁၀း၃၀ နာရီတွင် မန္တလေးမြုို့မှ ပြင်ဦးလွင်မြို့သို့ သွားရောက်ရာ စိန်ဂျိုးဇက် ရဟန်းဖြစ်တက္ကသိုလ်တွင် ရဟန်းတော် များ၊ ဆေမီနာရီကျောင်းသားများမှ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ကိုယ်စားလှယ်မှ သြ၀ါဒမြွက်ကြားခြင်းနှင့် စာချရဟန်းတော်များနှင့် နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ခဲ့သည်။
နေ့လည် ၁း၃၀နာရီတွင် ဆလေးရှင်း ဒဿနိကဗေဒဌာနသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ရာ ဆလေးရှင်း ရဟန်းတော်များ၊ ဆေမီ နာရီကျောင်းသားများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့၏။ နေ့လည်၂း၁၅ နာရီတွင် စိန်အာလောရှက်ဆေမီနာရီ(Minor)သို့ သွားရောက်ရာ ဘုရားကျောင်းထဲတွင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ကိုယ်စားလှယ်မှ ဆေမီနာရီ ကျောင်းသားငယ်များအား အားပေး စကားပြော ကြားခြင်း၊ သူကိုယ်တိုင် ကလေးဘ၀မှ စတင်ခဲ့ကာ ကြိုးစားခြင်းဖြင့် ကျောင်းသားကလေးငယ်များ တနေ့ ဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော် ပေါလ်ကဲ့သို့ ဖြစ်လာမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားကာ ခေတ္တ အနားယူခဲ့သည်။
ညနေ ၃း၀၀ နာရီတွင်ှSt. Mary Church သို့ သွားရောက်ရာ ကျောင်းထိုင်ဖာသာရ် ပီတာမျိုးအောင်၊ သာသနာ့ အကျိုးတော်ဆောင်များ၊ သစ္စာသုံးပါးခံ သူတော်စဉ်များ၊ မြို့ပေါ်ရှိဘာသာတူများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ညနေ၄း၀၀နာရီတွင် အနီးစခန်းရှိ နာဇရက် ဆေမီနာရီ (Minor) သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ကာ မန္တလေးမြို့ သို့ ပြန်လည် ထွက်ခွာလာခဲ့၏။ ည၇း၀၀ နာရီတွင် မန္တလေးဆရာတော်ကျောင်းတိုက်တွင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ကိုယ်စားလှယ်နှင့် သာသနာ့ အကျိုးတော်ဆောင်များ ညစာ အတူ စားသုံးခဲ့၏။
ညပိုင်းတွင် ဖာသာရ် ၀င်းမြင့် ဦးဆောင်သော လူငယ်များနှင့် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ကိုယ်စားလှယ်တို့ ရင်းရင်းနှီးနှီး တွေ့ ဆုံနှုတ်ဆက် ကြသည်။ ၁၉.၉.၂၀၁၁ နေ့ နံနက် ၆း၃၀နာရီတွင် မန္တလေးမြို့ စိန်သောမတ် ဆေမီနာရီ အကြိုရဟန်းဖြစ် တက္ကသိုလ် (Pre Major) တွင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ကိုယ်စားလှယ်မှ မစ္ဆားဟောကြားပေးပြီး ဖာသာရ်များနှင့် နံနက်စာ သုံးဆောင်ကြသည်။
နံနက် ၈း၃၀နာရီတွင် ဆရာတော် ကျောင်းတိုက်၌ သစ္စာသုံးပါးခံ သူတော်စင်များနှင့် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ကိုယ်စားလှယ် တို့ တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ကြပြီး နံနက်၉း၁၅ နာရီတွင် မန္တလေးမြို့မှ လေယာဉ်ဖြင့် ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။
ဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော်ကြီးပေါလ်ဇိန်ထုန်းဂရောင်၏ ပွဲတော် ကျင်းပခြင်း
ဇွန်လ(၂၉)ရက်နေ့ တွင် ဆရာတော်ပေါလ်ဦးဆောင်ကာ ဘုန်းတော်ကြီး (၁၇)ပါး နှင့် ပ်ီတာနှင့်ပေါလ် ဘွဲ့ခံ ဆရာတော်နှင့် ဘုန်းတော်ကြီးများ အတွက် ကျေးဇူးတင်မစ္ဆားပွဲကို ဘာသာဝင် ပရိတ်သတ် (၃၀၀) ကျော် တက်ရောက် ပါဝင် ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိ ပါသည်။
ပထမအကြိမ်မြောက် ဖခင်များအား ဂုဏ်ပြုပွဲတော်နေ့ ကျင်းပခြင်း၊ (မန္တလေးမြို့)
ဇွန်လ(၂၅)ရက်နေ့တွင် ဘုန်းတော်ကြီး (၇)ပါးဦးဆောင်ကာ၊ ဘာသာဝင် (၃၇၀) ကျော်ပါဝင်ကာ ကြာနီကန် ကက်သလစ် သချုင်္ိင်း တွင် ကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုမစ္ဆားတရားကိုပူဇော်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ပါဝင်သော ဘာသာဝင် များမှ အလှူငွေ(၆)သိန်းကျော်ကိုလည်း လှူဒါန်းခဲ့ကြပါသည်။ ဖခင်များအားဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် သင်္ချိုင်းအတွင်း စိမ်းလန်း စိုပြေရေး အတွက် သစ်ပင်(၁၀၀)ကို စိုက်ပျိုး ခဲ့ကြပါသည်။
ဓါတ်ပုံ - မဇ္ဈိမ
ဇွန်လ (၂၄) ရက်နေ့ နံနက် (၇း၀၀) နာရီတွင် ဘုန်းတော်ကြီး (၁၇) ပါးဦးဆောင်ကာ၊ ဘာသာဝင် ပရိတ်သတ် ဦးရေ (၅၀၀) ကျော်ပါဝင် ကာ၊ အထူးအစီအစဉ် အနေဖြင့် ဖာသာပီတာ ဦးလှရွှေ၏ ရဟန်းဝါတော် နှစ်(၄ဝ) ဂျူဗလီကျေးဇူးတင် မစ္ဆား တရား ပူဇော်ခြင်း ကို ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ဇွန်လ (၁၁) ရက် နေ့ နံနက် ၇း၀၀ နာရီတွင် ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီး ဂျွန်ဘော့စ်ကို စိုးလင်း ဦးဆောင်ကာ။ ဘုန်းတော်ကြီး (၅)ပါးနှင့် ဘာသာဝင်ဦးရေ (၁၅၀) ခန့် ပါဝင်ကာ ကျေးဇူးတင် မစ္ဆားတရား ပူဇော်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။။
(၉၇) ကြိမ်မြောက် စိန့်အလွိုက်ရှက်စ်ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းပွဲတော် (ပြင်ဦးလွင်)
ဇွန်လ (၂၁) ရက်နေ့၊ နံနက်(၉း၀၀) နာရီတွင် ဘုန်းတော်ကြီး (၁၀)ပါး ဦးဆောင်ကာ ဘာသာဝင် (၂၅၀) ကျော် ပါဝင်ကာ ကျေးဇူးတင် မစ္ဆားတရားပူဇော်ခြင်းပြုလုပ်ကာ၊ စိန့်အလွိုက်ရှက်စ်မိသားစုအသင်းမှ တစ်ရက်တာ ၀တ်စောင့်ခြင်းနှင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း၊ ကံစမ်းမဲများဖောက်ကာ ရံပုံငွေရှာခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
အသင်းသားများ၏ စုဗူးများမှ အလှူ ရရှိငွေ (၆)သိန်းကျော် ရရှိပြီး၊ ၄င်းနေ့ နံနက်တွင် အသင်းသားများ၏ ထပ်မံ လှူဒါန်းငွေ (၇)သိန်းကျော်နှင့် ဆန်အိတ် (၃၃) အိတ် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် အနေဖြင့် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းများ အတွက် တစ်ပါတ်ကို တစ်ကြိမ် အသား ဟင်းသုံးဆောင်နိုင်ရန် အသင်းဝင် (၁၃)ဦးမှ လှူဒါန်းကျွေးမွေးနိုင်ရန် စာရင်းပေး ခဲ့ပါသည်။ ချို့တဲ့သောကျောင်းသားများအား ကျောင်းဝင်ကြေး(၁)သိန်း မတတ်နိုင်ပါက၊ အပြည့်အဝ မဟုတ်သော်လည်း တစ်စိတ် တစ်ပိုင်းကို ကူညီ ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရပါသည်။ ဦးကျော်ဝင်း၊ ဒေါ်နီနီမိသားစုမှ လာမည့်နှစ် အတွက် ကုန်ကျမည့် ဆန်အိတ်(၂၀၀)ခန့်ကို လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ လှူဒါန်း ပါဝင်လိုသော သူများ အနေဖြင့် လည်း ကျောင်းအုပ် ဘုန်းတော်ကြီးထံသို့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Subpages (5): Announcements Announcements-old Events Monthly News မန္တလေးသာသနာနှင့် ဘာသာရေးသတင်းများ